Amandla okuThengisa kwi-Intanethi ngeCDNify | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 26, 2013 UMike Cunsolo
Sonke besikhe asikho. Ukusebenza nzima kwiphulo lakho lokuthengisa, ukwenza iiyure eziphambeneyo kunye nokwenza imisebenzi emininzi njengezona zilungileyo kubo. Ukuzama okusemandleni akho ukuqinisekisa ukuba yonke into ikwindawo, ukuze izinto zihambe kakuhle kangangoko xa usiya kuphila. Ngokuqinisekileyo bendilapho kwaye ndilahlekile kwinqanaba leeyure endizichithe ndibaleka ngokungathi ligeza. Kodwa uchulumanco yinxalenye enkulu yesizathu sokuba wenze i kuba emva koko uyazisa kwaye uza kubona wonke umsebenzi onzima uqala ukuhlawula.
Abantu bayazibandakanya nomxholo wakho kwaye babelana ngawo. Ukwaziswa kwegama lomthengi wakho kuyanda kwaye konke okufuneka ukwenze kukuhlala phantsi ubukele ukuba umsebenzi wemidiya yoluntu ujika kwiinguqulelo zewebhusayithi. Ixesha lokuvula iibhiya.
Kodwa emva koko, xa uvula ibhotile yakho yesibini, kwenzeka into embi kakhulu! Indawo yakho yewebhu igaya ukumisa phantsi koxinzelelo lwezithuthi. Okwangoku akukho nto unokuyenza ngaphandle kokuba sele ufumene indawo yogcino endaweni (ngaphandle kokuba uvule ibhiya yesibini).
Njengomphathi weNtengiso yeDijithali ndifuna nje ukwazi ukuba iphulo lam liza kuguquka. Andisoloko ndinalo ixesha (okanye ulwazi lobuchwephesha ukuba ndinyanisekile) ukucinga malunga nokuba indawo esithumela kuyo abathengi abanokubakho iya kuma kukugcwala kwabantu.
Kwaye kulapho CDNify unokukunceda.
CDNify sisiqalo endisisebenzelayo njenge-CMO, esisekwe nguJames Mulvany. Eyona ndlela yokuchaza uJames ngumqambi. Luhlobo lomntu oqondayo ukuba angazithatha njani izinto ezinzima kwaye zenze kube lula ukunxibelelana nazo. Kwaye yile nto yenziwa yiCDNify. Kuthatha into edla ngokudika ukuyenza kwaye iyenze lula.
Ukuba ukhe wazama ukumilisela yomxholo wenethiwekhi (CDN) ngaphambili, uyazi ukuba ayisiyiyo eyona nto ilula yokufumana intloko yakho. Inkqubo kwishishini 'bubungakanani obulingene konke', eyindlela yomlilo eqinisekileyo yokuzishiya uphuma epokothweni kwaye uhlawulela iinkonzo ongazifuniyo. Le yinto esizama ukuyitshintsha.
I-CDNify yinethiwekhi yokuhambisa umxholo eyenza ukuba kube lula ngokulula ukufumana i-CDN kwaye isebenze. Kuyakhawuleza ukuqalisa kunye nokugqwesa kuko konke, kuthatha umxholo wakho kwaye ukuhambisa kubaphulaphuli bakho ngokukhawuleza- oko kuthetha ukuba akufuneki ukhathazeke ngezinto ezinzima kwaye ungagxila ekuhambiseni umkhankaso omangalisayo endaweni yoko.
Ngokusebenzisa i-CDNify ungathi ndlelantle kwipampu yezithuthi ezinkqonkqoza indawo yakho ngaphandle kweintanethi. Ngenxa yokuba 'sisebenza' kwi-CDN sinokusasaza umxholo wakho kuyo yonke inethiwekhi yethu yelifu, ukunciphisa amaxesha omthwalo kunye nokuqinisekisa ukuba indawo yakho inokumelana nokunyuka kwezithuthi. Oku kuyenza ifikeleleke ngakumbi kwaye kuthetha ukuba ubhatalela kuphela idatha oyisebenzisayo.
Esona sibonelelo siphambili sokuba umanyano Kukuba sinokutsiba phakathi kwenethiwekhi eyahlukeneyo yelifu, esivumela ukuba sikhawuleze ukuhambisa umxholo wakho ngokusekwe kwindawo yabaphulaphuli bakho. Oku kubonelela ngamava akhawulezayo, kwaye kumnandi kuwo kwaye kukunceda wandise iziphumo zakho zephulo ngokuguqula ii-eyeballs zibe ngonqakrazo.
Okwangoku sinayo Ii-POP ezingama-40 kwihlabathi liphela kwaye sikhula le nethiwekhi ngalo lonke ixesha. Sikwasebenza kuluhlu lokudityaniswa ukwenza iinzame zakho zentengiso zibe lula nokuba ungalihambisa liphi iqonga.
Ungabhalisela iiveki ezimbini zokuvavanywa simahla ngoku kwi-www.cdnify.com kwaye sizakuba lapho ukukunceda uqalise.
UMike Cunsolo nguCMO we CDNify, uthungelwano lokuhanjiswa komxholo olwenza kube lula ukufumana i-CDN kwaye isebenze.